Dad badan! - Tafaariiqle Mareykan ah ayaa abuuray a ololaha kaas oo maalin walba gaarsiin jiray macluumaad ku saabsan hadiyadaha iyo heshiisyada macaamiisha. Qeybtan hal-abuurka ah waxay isku darsatay galleello la beddeli karo oo ay ka kooban tahay muuqaal animation ku leh shax kasta, oo leh shay u gaar ah oo fasax ah oo fasax leh si uu ula macaamilo dadka wax iibsanaya xitaa in ka badan. A dukaanka hadda wac wicitaanka ficilka (CTA) ka dibna u horseeday bogga iibsiga alaabada. Tani waxay ahayd mid si heer sare ah loogu guuleysto hal abuurkeeda marka la isku daro awoodaha warbaahinta hodanka ah iyo madadaalo, sawir qayaxan.
STIHL - Bixiye caalami ah oo ka mid ah qalabka korontada iyo baytariyada ayaa isticmaalay olole mowduuc mawduuc leh kaas oo animation furitaanku ka soo muuqanayay xirmooyin ay ku jiraan xirmooyinkooda mawduuc-midab iyo awood koronto. Dhag-dhigga CTA-da ayaa macaamiisha u horseeday khibrad la beddeli karo, nalalka ciidaha ee kor ku xusan, halkaas oo aad kaga adeegan karto saddex heshiis oo kala duwan. Kaqeybgal dheeri ah ayaa u horseeday daawadayaasha bogga faahfaahinta sheyga iyo keyd bakhaar si ay u helaan dukaanka ugu dhow ee iibiya alaabadooda. Ololahani wuxuu qabtay shaqo aad u weyn oo ah isku-darka animation-ka warbaahinta hodanka ah iyo is-dhexgalka si loo abuuro qayb soo jiidata oo kaxeysa wacyiga wax soo saarka / heshiiska, iyo sidoo kale qalab weyn oo lagu helo ganacsadaha ugu dhow.